IINGCAMANGO EZINGAMA-60 EZIPHAMBILI ZOKUPHINDA ZILAYISHE KWAKHONA IIBENCH-UYILO LWAMAGUMBI - IZIXHOBO
Iingcamango ezingama-60 eziPhambili zokuPhinda zilayishe kwakhona iiBench-Uyilo lwamaGumbi
Masijongane nayo; ukuthenga umjikelo wexabiso lomdlalo wefektri onamaxabiso kunokubiza kakhulu emva kwethutyana. Ngethamsanqa, ukuba negumbi lokuphinda ulayishe kwakhona ecaleni kwexesha elininzi lokwenza ukuba kufikeleleke, ii-ammo ezichanekileyo zifikeleleke ngokulula kuninzi. Xa kuziwa kulayishwa kwakhona kungabizi kakhulu, kulungile, unokuhlela ukuphosa loo nto ngefestile xa ucinga ukuba uya kuthi ekugqibeleni uphele ngokudubula rhoqo.
Ewe kunjalo, ukuba ungumthengi we-savvy xa kufikwa ekuthengeni ii-primers, umgubo, kunye neebhulethi, ungazinciphisa iindleko zakho kakhulu. Kodwa enyanisweni, ukuthatha ithuba le powders esebenzayo, ukwakha imithwalo yenjongo ekhethekileyo, ukuqonda ngokuchanekileyo, kunye nokulayisha iindidi ezingasasebenziyo kunokuba nomvuzo omkhulu kunokugcina imali ezimbalwa apha naphaya.
Inyani yile, ukuphinda ulayishe kwakhona kuneenzuzo kunye neengozi, kwaye andizukukufa xa uneenkcukacha. Endaweni yoko, uya kufumana ezona ziphezulu zingama-60 zokuphinda ulayishe kwakhona izimvo zebhentshi kunye noyilo lwegumbi elingezantsi.
Nokuba ukhangela indawo encinci yokusebenza okanye iseti enkulu yokunyusa indawo yakho yokubonelela nge-zombie, uya kufumana inkuthazo eninzi yokwenza indawo yokugqibela.
ii-tattoos zesifuba ezipholileyo emadodeni
Njengasentla ngaphezulu kwehermes
isitulo sokuhlambela esakhelwe ngaphakathi
Iitattoo zomtshato zabafazi
ankh tattoo ngelihlo lehorus
Igaraji encinci indoda yomqolomba izimvo kuhlahlo-lwabiwo mali
Uhlela njani izixhobo zombane